အဆိုပါ 3D ပုံနှိပ်လျှပ်စစ်ကားထဲတွင်မည်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပါသလော သင်ကဖွင့်လှစ်ဖို့ဝံ့သလား? - တရုတ် Cixi Lanbo ပုံနှိပ်
အဆိုပါ 3D ပုံနှိပ်လျှပ်စစ်ကားထဲတွင်မည်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပါသလော သင်ကဖွင့်လှစ်ဖို့ဝံ့သလား?
3D ပုံနှိပ်နည်းပညာအလွှာအားဖြင့်အရာဝတ္ထုအလွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ print ထုတ်တို့အားဤသို့သောအမှုန့်သတ္တုသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အဖြစ် bondable ပစ္စည်းသုံးပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီနည်းပညာလက်ဝတ်ရတနာ, ဖိနပ်, စက်မှုဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေး, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး, မော်တော်ကား, အာကာသနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာများ၏နယ်ပယ်များတွင် application များရှိပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ 2010 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကို 3D ပရင်တာပေါ်ပုံနှိပ်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးကားကို urbee ထွက်လာ၏။ မကြာသေးမီက XEV က 3D ထုတ်လုပ်ရန်တရုတ်နိုင်ငံ၏ 3D ပရင်တာပစ္စည်းများကုမ္ပဏီ polymake နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အီတလီလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်-ထုတ်လုပ် 3D ပုံနှိပ်လျှပ်စစ်ကားဖြစ်လိမ့်မည်သည့်လျှပ်စစ်ကား LSEV, ပုံနှိပ်။ ဒီကားများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာ3ကာလ၌အကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည်, ကား 43 တစ်နာရီမိုင်တစ်ထိပ်တန်းအမြန်နှုန်း, 93 မိုင်တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံရှိပါတယ်, ပြီးပြည့်အဝကားကိုသာ 450 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး။
၏သင်တန်း, ဂျပန်ရဲ့ဟွန်ဒါမကြာသေးမီကလည်း Single-ထိုင်ခုံလျှပ်စစ်ကားတည်ဆောက်နီးပါး 3D ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်ခန္ဓာကိုယ်ပြားပုံနှိပ်နှင့်ယခုအဓိကအားဖြင့်ဘီစကွတ်ပေးပို့ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ဟွန်ဒါပုံစံအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သောကဆိုသည်။ 3D ပုံနှိပ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ, အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးဒေတာမတိကျတဲ့ configuration ကိုဒေတာရှိပါတယ်ဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့နည်းပညာကြောင့်ပင်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုမှောကျဖို့နည်းပညာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကလကျခံဖို့ပွင့်လင်းစိတ်ကိုခံရသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိ 3D ပုံနှိပ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့်သူတို့ချုံ့ခြင်းနှင့်နိမ့်မြန်နှုန်းနယ်ပယ်များတွင်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ ဒီလိုယာဉ်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အော်ပရေတာအဖြစ်လာမည့် 1-2 နှစ်အတွင်း 3D ပုံနှိပ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအပေါ်သက်ဆိုင်ရာဒေတာ, အဲဒီမှာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ နှစ်သိမ့်ပြီးပို။ လျှပ်စစ်ကားပုံနှိပ်အဆိုပါ 3D င်း၏နို့စို့အရွယ်ဆဲဖြစ်ပြီး, အဲဒီမှာလုံခြုံရေးစမ်းသပ်မှုအပေါ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အစီရင်ခံစာများဖြစ်ခြင်းနှင့်စားသုံးသူများကယုံကြည်စိတ်ချရသည့်မော်တော်ယာဉ်များကိုစျေးကွက်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အောက်ပါယာဉ်များအတွေ့အကြုံကိုစီးရေရှည်မှာ, 3D printing အတွက်ဒါပါလိမ့်မယ် လျှပ်စစ်ကားများလာပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုစံ။ တကယ်တော့, လျှပ်စစ်ကားပုံနှိပ်ဒီ 3D အနိမ့်ကုန်ကျလျှင်ရေးသားသူ 3D လျှပ်စစ်ကားများပုံနှိပ်ဖွင့်ဖို့စိတ်ထဲမထားဘူး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံသည်, ပြုလုပ်မကြိုးစားဘာလို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတစ်စီးလိုအပ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းနိုငျပါသညျ!